တခြားသူဓာတ်ပုံနှင့် လိမ်လည်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » တခြားသူဓာတ်ပုံနှင့် လိမ်လည်သူ	9
Posted by အောင် မိုးသူ on Jun 30, 2016 in My Dear Diary |9comments
ဒီနေ့ နံနက်စောစော တခြားသူဓာတ်ပုံနဲ့ လိမ်လည်သူတစ်ယောက်ကို သက်သေနဲ့ မိခဲ့တယ်။ အဲ့သည်သူကို ဘယ်လို အရေးယူရမလဲ အမျိုးတွေ ပြောကြပါဦး။
လိမ်လည်သူ ကြောင်ကြီးအား မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
Tawwin Pan says: ပုံတွေကြည့်ပြီးနားမလည်ဘူးကော…….
အောင်မိုးသူပုံကို တခြားသူက ယူသုံးထားတာလား။
Cyber Law နဲ့ အရေးယူလို့မရနိုင်ဘူးလား။
အင်တာနက်သင်တုန်းက Gmail Account တစ်ခုကနေ ကိုယ့်ကို Cyber Sex လာပြောတယ်။ သင်တန်းသူတွေရှေ့မှာ၊ သင်တန်းသူတွေကလည်း ပညာရေးတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသူတွေ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီတစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ကောင်မလေးပုံက အဲဒီသင်တန်းသူတွေရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်။ သူ့ကောင်မလေးဆိုပြီး ပြောတာပဲ။ ဒီဘက်က သင်တန်းသူတွေကလည်း မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ကာယကံရှင်ကို အသိပေးရမယ်ဆိုပြီး ပြောကြတာ။
သင်တန်းက ငါးရက်သင်တန်းဆိုတော့ အဲဒီသင်တန်းသူတွေနဲ့လည်း မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး။
ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြတယ်မသိ။ ကောင်မလေးရည်းစားမှန်ရင်တော့ အဆက်ဖြတ်ခိုင်းယုံကလွဲပြီး ဘာမှလည်း လုပ်လို့မရလောက်ဘူးထင်တာပဲ အဲဒီတုန်းက။
အောင် မိုးသူ says: အစ်မ အဲ့ဒါ ဖေ့ဘုတ်က တီမွဘုတ် အကောင့် tun tun win ကို အူကြောင်းကြီး အကောင့် လာပြောထားတာ။ အူးကြောင်ကြီးက အဲ့ဒါ သူ့ပုံပါတဲ့။
Tawwin Pan says: အွန်း…..နောက်နေကြတာလား……
ခင်ဇော် says: ဒုတ်ထိုးလုပ်ပါ။
အောင် မိုးသူ says: ကြောင်းသားဒုတ်ထိုးပေါ့
မြစပဲရိုး says: ဒီနေ့FB က ဒီမို တစ်ယောက် ရဲ့ စာမျက်နှာ Post တစ်ပုဒ် က နေ အစ ဆွဲလိုက်ကြည့် မိတာ Accounts တစ်ခု ကို တွေ့လိုက်မိတယ်။
အမုန်းကြီး လွန်းနေတာ ကိုမြင်ရတော့ တကယ်ဘဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။
ထင်တာ မှားနိုင်ပေမဲ့ မှန်လဲ မှန်နေနိုင်တဲ့ အရေးအသားမျိုး ဘဲ။
နေရာလဲ တူတယ်။ ဒါမျိုးရေးတတ်သူ ရှားပါတယ်။ Profile ကလဲ အဲဒီ သင်္ကေတဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အရီးရေ အဲ့ဒါ အူးကြောင်ကြီးပါ…. အူးကြောင်ကြီးနဲ့ အန်တီ မွဘုတ်တို့ ချက်ထားတာ တီမွဘုတ်က Tun Tun Win အကောင့်ပါ။
ဦးကြောင်ကြီး says: အောင်မိုးသူ
Thint Aye Yeik says: ဦးကြောင်က မိုးမိုးသူရဲ့ ဓါတ်ပုံကို သိမ်းထားပြီး ထုတ်ထုတ်ပြနေတာပဲ။
Aကဏ္ဍ. . .မိုးမိုးသူကို ဦးကြောင် ခိုက်နေတာမျန်းလားးး